भारदहका ६० वर्षे रामकिसुन यसरी मारिए काठम ाडौंले पढोस् भारदह गोलीकाण्डको कथा | Hulaki Online
2021 Mar 02, Tuesday 12:53
भारदहका ६० वर्षे रामकिसुन यसरी मारिए काठम ाडौंले पढोस् भारदह गोलीकाण्डको कथा
संप्रेषण September 9, 2015
एस. के. शान
२३ भदौ, सप्तरी । भारदह गाविसमा प्रहरीको गोली लागेर बुधबार पुनः एकजनाको ज्यान गयो । प्रहरीको गोली लागेर पोर्ताहा गाविस-१ निवासी रामकिसुन राउतको मृत्यु भएको हो ।
मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भएको झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी ६० बर्षीय राउतको मृत्यु भयो, उनी भारदहबासीका मिलनसार अभिभावक थिए ।
भारदहममै प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु हुने रामकिसुन दोस्रा व्यक्ति हुन् । यसअघि भदौ १ गते प्रहरीले गोली चलाउँदा भारदह १ निवासी राजीव राउतको मृत्यु भएको थियो ।
प्रहरीले चलाएको रबरको गोली लागेर बुधबार अन्य दुई व्यक्ति पनि घाइते भएका छन् । पोर्ताहा ५ बस्ने विजय खिडहरी र पोर्ताहा ४ बस्ने अनिल ठाकुर रबरको गोली लागेर घाइते भएका छन् ।
कसरी मारिए रामकिसुन ?
प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच बुधबार झडप भइरहेको थियो । प्रदर्शनकारीले ढुंगा फ्याँकिरहेका थिए भने प्रहरीले अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरिरहेका थिए । रामकिसुन त्यसअघि नै घरभन्दा करिब दुई सय मिटर पर रहेको शीतल किराना पसलमा केही सामान किन्न आएका रहेछन् ।
तर, झडप तिब्र भइसकेकाले किराना पसलका साहूले पसल खोलेनन् । रामकिसुन पसलबाहिर रहेको बेञ्चमा बसे । विस्तारै प्रदर्शनकारीले त्यहीँ पसलतिर गएर प्रहरीमार्थि ढुंगा बर्साउन थाले । प्रहरीले पनि उत्तैतिर अश्रु ग्यास र हवाई फायर गर्न थाल्यो । त्यत्तिकैमा प्रहरीले गोली चलाउन थाल्यो । सशस्त्र प्रहरीको समूहबाट गोली चलेको धेरैले थाहै पाएनन् ।
प्रदर्शनकारीहरु त ज्यान बचाएर भागे, तर बेञ्चमा बसिरहेका ६० बर्षीय राउतको छातीमा गोली लाग्यो । छातीमा लागेको गोली पिठ्यूँबाट बाहिर निस्केको एकमिनेटभित्रै उनको प्राण निस्कियो ।
बुधबार प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका राउत भारत सरकारको कोशी कोलोनी परियोजना अन्तर्गत विराटनगरस्थित सम्पर्क तथा भू-सर्जन कार्यालयमा चालकको रुपमा कार्यरत रही केही दिन अगाडि मात्रै अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् ।
गाउँमा भद्र व्यक्तिका रुपमा परिचित राउतको कसैसँग कुनै किसिमको दुश्मनी थिएन । ‘गाउँमा कुनै किसिमको समस्या हुँदा के गर्ने भनेर उनैसमक्ष नै सरसल्लाहका लागि गाउँलेहरु आउथे । मृतकका भाइ सञ्चारकर्मी समेत रहेका धर्मपाल राउतले भने, “गाउँमा उनीसँग कसैको कुनै किसिमको बादविवाद हालसम्म भएको छैन ।’
‘स्थानीय व्यापारीमाझ उनी अत्यधीक लोकपि्रय थिए । ‘बेरोजगार व्यक्तिलाई थोरै सहयोग गरेर उनले व्यापार, व्यवसाय शुरु गराउँथे’ स्थानीय माँ कंकालनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निर्देशक आकाश भण्डारीले भने, उनको गुणगान गाउँदा कुनै व्यापारी थाक्दैनथे ।
रामकिसुनको निधनपछि पोर्ताहा मात्र होइन, भारदह गाविसका बासिन्दाहरु समेत शोकमग्न भएका छन् ।
कसरी भयो झड्प ?
मंगलबार राति मधेसी मोर्चा सप्तरीका नेता/कार्यकर्ताहरु पूर्व -पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत भारदहमा रुख ढालेर रातभर जाग्राम बसेका थिए । प्रहरीले सो राजमार्ग भएर चल्ने सवारीसाधन स्कटिङ्गलाई निरन्तरता दिएपछि मधेसी मोर्चाका जिल्ला तहका नेताहरुको अगुवाइमा रातभरि सडकमा रुख ढालेर उनीहरु जाग्राम बसेका थिए ।
लगभग पाँच हजारको संख्यामा रातभरि सडकमै रहेका आन्दोलनकारीले इलाका प्रहरी कार्यालय भारदहदेखि डेढ सय मिटर पश्चिममा रहेको कदमको ठूलो रुख र मुख्य चोकमा अशोकको ठूलो रुख काटेर सडक जाम गरेका थिए ।
बिहान सबै आन्दोलनकारी आ-आफ्ना घरतिर गए । आन्दोलनकारी घर गएपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी शिशिर कर्माचार्यको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले प्रहरी कार्यालय अगाडिको रुख सडकबाट हटाए । तर, चोकको रुख हटाउने क्रममा प्रदर्शनकारीको तर्फबाट प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार सुरु भयो । ५/७ जना मिलेर ढुंगा हानेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई लखेटेर भगाए ।
त्यसको १० मिनेट नबित्दै करिब ५० जनाको संख्यामा आएका प्रदर्शनकारीले सडकको अवरोध हटाइरहेका प्रहरीमाथि ढुंगा बर्साए । विस्तारै प्रदर्शनकारीको भिड बढ्दै गयो ।
प्रदर्शनकारीले ढुंगाा हान्ने र प्रहरीले अश्रु ग्यास एवं हवाइ फायर प्रहार गर्ने क्रम केहीबेर जारी रह्यो । दुबै पक्षबीच लगभग एकघण्टा झडप भएपछि प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई ताकेरै गोली चलायो । आन्दोलनकारीलाई त केही भएन तर, रामकिुसन राउत ठहरै भए ।
त्यसपछि झडपको स्थिति रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले भारदहमा दिउँसो २ देखि बिहीबार बिहान ६ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ ।
भक्तजनमाथि पनि कुटपिट
प्रदर्शनका क्रममा कंकालिनी मन्दिरमा पूजापाठ गर्न आएका व्यक्तिहरुलाई पनि प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेका छन् ।
भारतको बीरपुरबाट पूजा गर्न आएका ओमप्रकाश साह, सप्तरीको डिमनबाट आएका सन्तोष कुमार रामलाई प्रहरीले बन्दुकको कुन्दाले कुटपिट गर्दा उनीहरु गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरुको स्थानीय क्लिनिकमा उपचार गरिएको छ ।
गोलीकाण्डपछि झन् आक्रोशित
प्रहरीले चलाएको गोली लागेर भारदहमा थप एक व्यक्तिको ज्यान गएपछि जिल्लाका बासिन्दाहरु झन् आक्रोशित भएका छन् । गोली लागेको घटना प्रवाह भएको केहीबेरमै जिल्लाको भारदहसहित कञ्चनरुप नगरपालिका, हनुमाननगर, फर्सेठ, रुपनीका बासिन्दाहरुले बन्दलाई कडा पारेका छन् । सम्पूर्ण पसलहरु बन्द गराएर उनीहरुले ठाउँ-ठाउँमा सडक जाम गरेका छन् ।
आक्रोशित प्रदर्शनकारीले जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिकाको कञ्चनपुरस्थित अस्थायी ट्राफिक प्रहरी कार्यलयमा आगजनी गरी नष्ट गरेका छन् ।
गोलीकाण्डपछि कञ्चनरुप नगरपालिकामै मधेशी मोर्चाद्वारा पाँच हजारभन्दा बढीको सहभागितामा लाठी जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ । राज्यले दमनलाई निरन्तरता दिएका कारण जनता स्वयं जाग्न थालेको बताउँदै मधेसी मोर्चा सप्तरीका संयोजक दिनेश यादवले भने, ‘अब आन्दोलन अझ सशक्त बन्दै जानेछ ।’